Posted on May 03, 2016 | views: 416
सिद्धार्थ बैंकले जापानबाट रेमिट्यान्स सँगै बैंकिङ सेवा थाल्दै, भव्य कार्यक्रमबिच सुभारम्भ हुँदै
१८ बैशाख, टोकियो । सिद्धार्थ बैंकले जापानबाट रेमिट्यान्स सेवा सँगै बैंक खाता खोल्न सकिने सेवा सोमवारबाट औपचारिक सुरु गर्ने भएको छ । औपचारिक सेवा सुभारम्भ गर्न लागेको अवसर पारेर सिद्धार्थ रेमिट र स...
Posted on May 03, 2016 | views: 379
बजेट जेठ १५ गते भित्र ल्याउने सरकारको तयारी
१८ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट जेठ १५ गते भित्र ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि अर्थमन्त्रालयले मन्त्रालयगत र क्षेत्रगतरुपमा समेत छलफल गरेको छ । बजेट भाषण समयमै गरेर बज...
Posted on May 03, 2016 | views: 444
अनुदानको रकम वितरण गर्ने बैंक तोकियो
१७ बैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले अनुदान सम्झौता भएका आठ जिल्लाका आठवटा गाविसमा अनुदानको रकम वितरण गर्न बैंक तोकेको छ । गोरखाको हंसपुर, रामेछापको ओख्रेनी, सिन्धुलीको झाँगाझोली...
Posted on May 02, 2016 | views: 415
बढी पैसा लिएर ग्याँस बेच्ने पक्राउ
१७ बैशाख, भक्तपुर । भक्तपुरमा ग्यासमा कालोबजारी गरी बिक्री गर्ने एक जनालाई आज महानगरीय प्रहरी बृत्त थिमिले ग्याँस सहित पक्राऊ गरेको छ । अनन्तलिङेश्वर नगरपालिका ५ बालकोट बस्ने रामचन्द्र श्रेष्ठले ह...
अलपत्र राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको काम प्राधिकरणले अघि बढाउने
१७ बैशाख, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि अन्यौलमा रहेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाउने भएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बिहीबारको बैठकले ३२ मेगावाट क्षम...
Posted on May 02, 2016 | views: 386
अायल निगमका कर्मचारीलार्इ लुगा धुनेदेखि केरा र सख्खरसम्म भत्ता !
काठमाडौं,बैशाख १७ । सार्वजनिक संस्थानले आफ्ना कर्मचारीलाई लुगा धुनेदेखि केरा भत्तासम्म दिने गरेको पाइएको छ। वर्षौंदेखि नोक्सानीमा चल्दै आएको नेपाल आयल निगमले कर्मचारीलाई लुगा धुने र हेटौंडा सिमेन्ट उ...
अभाव नघटेपछि ग्यासको कोटा साढे ७ हजार टन बढाइयो
१७ बैशाख, काठमाडौं । इन्डियन आयल कर्पोरेशन ९आईओसी०बाट नेपालले पाउने ग्यसको कोटामा वृद्धि भएको छ । २९ हजार ४१६ मेट्रिकटन मासिक कोटालाई बढाएर अब ३७ हजार मेट्रिकटन कायम भएको आजको कारोबार दैनिकमा समाच...
१७ बैशाख, काठमाडौं । आपतकालमा चीन र बंगलादेशले दिएको चामल कुहिने प्रतीक्षामा सरकार भूकम्पलगत्तै घरबारविहीन नेपालीलाई सहयोग पुर्‍याउन मित्रराष्ट्र बंगलादेशले ७८ लाख किलो चामल उपलब्ध गरायो । तर, आपत...
Posted on May 02, 2016 | views: 446
नेताको नाम राखेर अनुदान खाने अस्पतालको मुख बन्द
१७ बैशाख, काठमाडौं । नेताका नामका तथा काठमाडौं उपत्यकाका अस्पतालले अब सरकारी अनुदान नपाउने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले अधिकारप्राप्त निकायबाट सञ्चालन स्वीकृति पाएका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका सामुदायिक अस...
काठमाडौं,बैशाख १६ । भक्तपुररको सीमा क्षेत्र एउटा कम्पनीको नामले स्थापित छ( जडीबुटी । पूर्वनेपाल जाने अधिकांश सवारी साधन रोक्नमात्र नभई बसोबासका लागि पनि उपयुक्त थलो बनेको छ यो । तर, कम्पनीकै कारण यो ...
Posted on May 02, 2016 | views: 403
सुनचाँदी पक्रेर अनियमितता गर्ने असई सहित दुई जना निलम्बित
१५ बैशाख, काठमाडौं । सप्तरी जिल्लामा व्यापारीको सुन पक्राउ गरी अनियमितता गरेको आरोपमा दुई प्रहरीलाई निलम्बन गरेको छ । सो कार्य संलग्न रहेका अन्यलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालिएको छ । पूर्वाञ्चल...
Posted on May 03, 2016 | views: 375
१५ बैशाख, काठमाडौं । संसद्को अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले आगामी आव २०७३/७४ को बजेट सङ्घीयतालगायतका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा सघाउने, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सघाउ पुग्ने र नाकाबन्दीले अ...
Posted on May 03, 2016 | views: 407
१५ बैशाख, बर्दिया । सरकारले वाली विकास कार्यक्रमका लागि वर्दिया जिल्लामा कृषकलाई ४ करोड ६७लाख आठ हजार अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । कृषकलाई प्रोत्साहनस्वरुप सानोसहयोगका रुपमाम अनुदान कृषकलाई ४ करोड ६७...
काठमाडौं,बैशाख १४ । कृषि विकास बैंकले आफ्ना साधारण शेयरधनीहरुलाई १५ प्रतिशत वोनस शेयर दिने भएको छ । आज बैंकको नवौं वार्षिक साधारण सभाले आर्थिक बर्ष २०७१–७२ को मुनाफाबाट १५ प्रतिशत वोनस शेयर र ५० प्रति...
काठमाडौं,बैशाख १३ । दातृनिकाय तथा आइएनजिओले आफूखुसी खर्च गर्ने क्रम बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त वैदेशिक सहायतामध्ये ३५ प्रतिशत अर्थात् करिब ४० अर्ब रुपैयाँ एनजिओ–आइएनजिओले आफूखुसी खर्च गरेका छन...
Posted on May 03, 2016 | views: 645
करोडौंको हिरा र सुन बरामद, सूचना लुकाउन खोज्दै प्रहरी
काठमाडौं,बैशाख १३ । धनगढी बसपार्कस्थित एसएस कलेक्सन सेन्टरको सटरमा लुकाएर राखेको बहुमूल्य हिरा र सुन प्रहरीले बरामद गरेको छ । सूचनाका आधारमा डोटीका शंकर भुललाई नेपालगञ्जबाट पक्राउ गरेपछि उनले लुकाएर र...
Posted on May 03, 2016 | views: 424
ग्यासको माग र आपूर्तिबीच अझै असन्तुलन
काठमाडौं,बैशाख १३ । नाकाबन्दी खुलेको अढाई महिना बितिसक्दा पनि खाना पकाउने ग्यासको माग र आपूर्तिबीच ६० हजार टनको ग्याप छ। पाँच महिना लामो नाकाबन्दीले खाजी भएका अधिकांश सिलिन्डर रिफिलिङ गर्न सामान्य दिन...
प्रहरीलाई पोसाक किन्न पैसा दिने नयाँ प्रस्ताव
१३ बैशाख, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले आफ्नो कर्मचारीलाई पोसाकको सट्टा नगद नै दिने प्रस्ताव गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले शनिवार अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँगको छलफलमा यस्तो प...
ओलीको बोली मात्रै ! पुनर्निर्माणमा बल्ल २ प्रतिशत रकम खर्च
१२ बैशाख, काठमाडौं । भूकम्प गएको एक वर्ष बित्दासमेत पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकमको २ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ। ९ महिनासम्म राजनीतिक किचलोले पुनर्निर्माण विधेयक...
Posted on May 02, 2016 | views: 370
आँटे संभव छ । इलाममा मात्रै डेढ अर्बको अदुवा उत्पादन
१२ बैशाख, इलाम । इलाम जिल्लामा यस वर्ष डेढ अर्ब रु मूल्य बराबरको अदुवा उत्पादन भएको छ । जिल्लामा यस वर्ष ११ लाख ४९ हजार ८५० मन '४० किलोको एक मन' अदुवा उत्पादन भई प्रतिमन रु एक हजार तीन सय ...
विद्युत गडबडीले उद्योगहरु मारमा
१२ बैशाख, चितवन । चितवनको औद्योगिक फिडरमा लाइनको अनियमितताले उद्योग सञ्चालक समस्यामा परेका छन् । आलोपालो गरेर उद्योग चलाउँदा समेत समस्या समाधान नभएपछि भरतपुरको सवस्टेसनदेखि पोखरा बसपार्क हुँदै मङ्...
Posted on May 03, 2016 | views: 364
नउड्ने जहाजको मासिक खर्च लाखभन्दा बढी
११ बैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यालय वीरगन्जमा छ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन । थाहा होस् पनि कसरी २०७२ साल भदौदेखि औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आउको निगमको कार्यालयले आठ ...
कर नतिर्ने ठूला घरानालाई फोहोर उपहार !
११ बैशाख, काठमाडौं । वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाले कर नबुझाउने ठूला घरानाका करदाताहरुबाट कर असुलीका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरेको छ। नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा समाचार छ। विशेष गरी मालपोत, घरजग्गा कर ...
काठमाडौं,बैशाख ९ । नेपाल टेलिकमको सिमबाट हुने प्रत्येक कलबापत निश्चित रकम छुट्याई त्यो रकम कल गर्ने व्यक्तिलाई सेयरस्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल टेलिकमको कम्पनी सुधारको...
चिनियाँ जहाज उडाउँदा आम्दानीभन्दा तीनगुणा बढी खर्च !
काठमाडौं,बैशाख ८ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमसँग रहेका दुई थान चिनियाँ जहाजले जति आम्दानी गर्छन्, तिनलाई उडाउन आम्दानीको तीनगुणा बढी खर्च हुने गरेको खुलेको छ । निगमसँग रहेको ५६ सिट क्षमत...